Milan Oo Tageysa Rome Iyadoo Trenitalia Tareen Ka Bixinaysa 3 Saacadaha | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Milan Oo Tageysa Rome Iyadoo Trenitalia Tareen Ka Bixinaysa 3 Saacadaha
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 13/07/2020)
Milan si Rome By tareenka ama Rome si Milan waa waayo-aragnimo fudud oo hufan. In aan ku xuso qurux badan! Waxaad qaadan kartaa a tareen jaban which may take longer than 3 hours but that Trains from Milan to Rome allows you to jump off at the joogsato loo baahan yahay si ay u sahamiyaan. Or you can jump on a non stop Trenitalia high speed Freccia train, taas oo qaadataa kaliya 3 saacadood oo 3 daqiiqo, much less than for the full journey by airplane! Wax kastoo aad go aansato hagidaan dhakhsaha badan waxay kaa caawin doontaa inaad gaarto go'aanka ugu fiican naftaada iyo safarkaaga!
masaafada safarka: 297 miles
waqtiga ugu dhaqsaha badan: 3h:03m
tareenada Daily: 89
Tigidhada Tareenka ee Milan ilaa Rome ayaa ka bilaabanaya :$51
Best in Tareenku Ticket bixiyaha: Save A Train of course
Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Badbaadi Tareenka Tikidhada Tareenka ee Jaban Websaydhka Adduunka.
Milan Si Rome By tareenka & Rome Si Milan By tareenka: muuqaal ah
Hel diyaar u ah inay la kulmaan qaar ka mid ah muuqaal dhab ah la taaban karo sida waxaad kortaan xagga koonfureed iyada oo Italy Lombardy, Emilia Romagna, iyo gobollada Tuscany. AV badan oo Arrow Trenitalia Tababar stop in Bologna, Padua ama Genoa iyo Bukurre ee Rome. On marinnada dhakhso, aad doonaa in aan loo baahan yahay in isbedel tareenada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad la dhoofayso on tareenka ee gobolka a gaabis ah oo ka raqiisan, laga yaabaa in lagaaga baahan yahay inaad si ay u gudbiyaan ka mid ah tareenka si ay u kale. Haddii aadan degdeg ah oo aad rabto in aad samayso faa'iidada ugu badan ee aad Milan in ay safar Rome By tareenka, ka dibna waxaan ku talin lahaa Doorashadan. Halkan waxaa ku qoran warbixinta kooban ee!
Iyadoo Milan ay magaalo madax, waa yaab ma laha in martida iyo ido in malaayiin si ay u Lombardy sannad kasta. Laakiin wixii ka baxsan jecel fashion ah, badan oo dheeraad ah waa in ay soo booqdaan meelo gobolka Lombardy ee Italy waxaa qaylinaya in ay soo booqdaan.
Waxaa jira waxyaabo xad-dhaaf ah si ay u sameeyaan gobolka this; maxfalka godan iyo Daar wayn ee harooyinka picturesque, booqashada workshops violin in magaalooyinka taariikhiga ah, being amazed at the art and architecture of Mantua – Lombardy really packs a punch for visitors.
Milan illaa tikidhada tareenka ee Mantua
Turin ilaa tikidhada tareenka Mantua
Padua illaa tikidhada tareenka ee Mantua
Tikid ilaa tareenka tigidhada Mantua
Waxaan aaminsan nahay Emilia Romagna si fudud kulan ee soo jiidashada ka damaashaaday Tuscany iyo Lombardy iyo dalabyo fursadaha temptingly awoodi waayo cunto ka soo cuneysid iyo hoyga. waa ah Milan in ay safar Rome By tareen fiican qarsoodi ah ee laga opinion, laakiin sidoo kale Rome si Milan tareen! U bood off at rugtan oo tag sahaminta!
Bolognia in Tareenadu Modena
Venice in Tareenadu Modena
Genoa si ay Tareenadu Modena
Florence si Tareenadu Modena
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo Bologna marka aad safarka ka Milan ilaa Rome oo leh Tareennada Trenitalia. Waxaan this mid ka mid ah baraha hogaanka ku talinaynaa in la tixgeliyo boodayaa off at. Fuuli jiray munaaradaha Dr Makumbe, buugga tours cunto xiiso leh. Haddii aad rabto in aad wax yar dambe sii joogi taas oo ka dhigaysa saldhig weyn Sahamin soo jiidashada kale gobolka.
Venice ilaa Bologna tigidhada
Florence illaa Bologna tikidka tareenka
Tikidka tikidhada tareenka Bologna
Milan illaa tikidhada tareenka Bologna
In ka yar a 30 kortaan daqiiqadii on the tareen xawaare sare ka Venice, Padua waxaa sidoo kale marar badan Halmaameen ka inta badan ee soo booqda. weli, waxa ay taasi safar maalin weyn ka Venice, bixiya bidhaamaysa gelin taariikhda hodanka ah oo magaalada ah in mar ahaa bulsho awood leh.
Home Italy jaamacadda labaad ee ugu da'da weyn, asaasay 1222, Padua ayaa difaacday jawiga vivacious magaalada jaamacad, la piazzas noole iyo jidadka arcaded, badan oo makhaayadaha iyo baararka meesha Spritz ku xoojisay waa de rigueur sida dabaylaha maalin galay fiidkii ah. Ha ka maqnaan aan ka bixin!
Milan in ay Tareenadu Padua
Verona si ay Tareenadu Padua
Bologna si ay Tareenadu Padua
Bergamo in Tareenadu Padua
Waayo, qof safar ah Milan ilaa Rome oo leh Tareenada Trenitalia ama wadada kale ee ku xeeran waana sidaas raadinayso a qoto dheer Geedka Dhalxiga ah, inta badan unvarnished iyo geesinimo dhab ah waayo-aragnimo safarka.
Waxaan kugula talineynaa inaad madax u noqoto Genoa (kaas oo sida Venice ahaa mar Jamhuuriyadda awood badda) fronting Sea Ligurian ah. Bixiya waayo-aragnimo dheeraad ah ceeriin iyo dhabta ah, aad u hesho dareen ah undiluted taariikhda, la kulmaan citys goobta farshaxanka hodan iyo iyo naqshadaha caan ah. One of the top reasons we enjoy it so much is that waxaa jira farshaxanka weyn iyo matxafyada waa uncrowded! Waxaad ka heli kartaa shuqullada by Caravaggio, Van Dyck. Rubens, Durer iyo Veronese in Bianco Palazzo iyo Palazzo Rosso iyo masterpieces kale Ogle Old World in dalka durkiya badan, sida Palace Royal iyo Gallery Qaranka ee Palazzo Spinola. Waxa kale oo jira tusaalooyin ganaax of School Genoese ee farshaxanka, caan ah qarnigii 17-ka, in Blanco Palazzo ah.
Milan in ay Tareenadu Genoa
Rome si ay Tareenadu Genoa
Florence si Tareenadu Genoa
Venice in Tareenadu Genoa
Milan Si Rome & Rome Si Milan Tareen Times
xawaaraha sare ee Trenitalia ee High Speed (OF) tareenada tago Central Station Milan mar ama laba jeer saacaddiiba mudo ah saldhiga Rome Termini - celcelis ahaan 90 tareenada maalin kasta. Ugu horreeya ee caleemaha tareen Trenitalia Central Station Milan at 5:00 a.m. tareenka ugu danbeysay ee Rome ka tago Milan at 11:18 p.m.
Fiiro gaar ah in maalmaha fasaxa iyo maalmaha fasaxa caadi ahaan ka dhigan tahay adeegga yar iyo waqtiyada safarka mararka dheer.
Tikidhada tareenka ee Milan illaa Rome
Tikidka Rome ilaa Milan tikidhada
Waxyaabaha Amni ee Tareenka Freccia ee u dhexeeya Milan <> Rome
Qaar badan oo ka mid ah tareenada AV Trenitalias Frecciargento safar maalin walba u dhexeeya Milan iyo Rome ee kaliya 3 saacadood oo 3 daqiiqo, kor u safraya 155 miles / 250 kiiloomitir saacaddiiba.
Tigidhada tareenka xawaaraha sare ee Talyaanigu waxay leeyihiin waxyaabo dheeraad ah oo aad u wanaagsan. Dukaamada korantada ee ku fadhiya kursigaaga si aad ugu dallacdo aaladda sidoo kale WiFi dul saaran tareenka Frecciarossa iyo Frecciargento. Si kastaba ha ahaatee, seenyaalaha ayaa hoos u dhici doona intaad gudaha ku jirto sugnan iyo saldhigyada. Waxaad kuheli kartaa makhaayad Talyaani ah oo weyn gaariga cuntada saaran tareen walba. Iyo sidoo kale gaadhi cunto Yimid cunto fudud, ismaris, iyo cabitaanka si aad kursiga. Dhamaadka baabuur kasta, waxaad ka heli doontaa musqulaha iyo badan oo uqaadi kartaa dukaanka boorsooyinka waaweyn.
Diyaar bay u tahay in ay xirxirto boorsooyinkaada isla markaana aad sahamiso Milan illaa Rome Iyadoo la raacayo Tareennada Trenitalia ama dhinaca kale ee ku xeeran – Rome ilaa Milan by Train in 3 Saacadaha? Wax kasta oo aad doorato, Ballanso tigidhada tareenkaaga daqiiqado adiga oo caawimaad ka helaya Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Milan Oo Tageysa Rome Tareenka Trenitalia” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / fr ama / luqadaha de iyo ka badan.
Maxaad Tareenka waa mid ka mid Hababka ugu badbaado badan Of Gaadiidka
Safarka Business by tareenka, Safarka tareenka, safarka Europe